१२ नेपाली र २ भारतिय भएको क्यानेडियन दुतावासको पुष्टी ! को को थिए त?
Home∕खेल जगत∕१२ नेपाली र २ भारतिय भएको क्यानेडियन दुतावासको पुष्टी ! को को थिए त?
June 21, 2016 koselihk 0
काठमाडौँ, ७ असार, सोमबार बिहानै अफगानिस्तानको काबुलमा आतङ्ककारीहरुले एक मिनीबसलाई निशाना बनाए । क्यानेडियन दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत व्यक्तिहरू सो मिनीबसमा सवार थिए । उनीहरु सिफ्ट चेन्ज गर्ने क्रममा मिनीबसमा चढेर जलालावादको हाइवे हुँदै दूतावासमा ड्युटीमा जाँदै गर्दा आतङ्ककारीको आक्रमणको निशाना बने । पैदल नै हिड्दै आएका आतङ्ककारीले बसमा आत्मघाती बम प्रहार गरे र १४ जनाको निर्मम हत्या गरे । जसमा १२ जना नेपाली र २ जना भारतीय नागरिक परे ।
हत्याकाण्डपछि अफगानको गृहमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १४ जना नेपाली मारिएको बताएको थियो । तर सोमबार साँझ काबुलमा रहेको क्यानडेली दूतावासले एक विज्ञप्ति निकाल्दै मृत्यु हुनेमध्ये १२ जना नेपाली र २ जना भारतीय नागरिक रहेको पुष्टी गर्यो । यता नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसको पुष्टी गर्दै अन्य ७ जना नेपाली पनि घाइते भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार घाइतेहरुको नाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने मतकहरुको पहिचान खुलिसकेको छ ।
ज्यान गुमाएका र घाईतेहरुको नामावली
कहाँ–कहाँका को–को नेपालीले ज्यान गुमाए ?
पैसा कमाउने र सुखद भविष्यको सपना बोकेर अफगान पुगेका १२ जना नेपालीले सोमबार बिहान ५ः४० बजे नै ज्यान गुमाउनु पर्यो । अफगानिस्तानमा खतरा छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि राम्रो सेवा सुविधा भएका कारण पनि नेपालीहरु त्यहाँ रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेका बेला १२ जना नेपालीले बिना कसुर ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार घाइतेहरुको अवस्था बुझ्ने कार्य भइरहेको छ । सोकालागि पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासबाट सम्पर्क भइरहेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार सरकारबाट अफगानिस्तानका विदेशी दूतावास, संयुक्त राष्ट्र संघ वा मातहतका निकायमा सुरक्षागार्डका रुपमा मात्र नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने गरेका छन् । यसरी आधिकारिक रुपमा जाने नेपालीको संख्या ३ हजार ३ सय २३ जना रहेको जनाइएको छ । तर आकर्षक तलवको लोभ देखाउँदै केही मेनपावर र दलालहरुले चोरबाटोबाट पनि धेरै नेपालीलाई अफगानिस्तान पठाएको बताइन्छ । यसरी अवैध तरिकाले अफगानिस्तान जाने नेपालीको संख्या कति छ त्यो भने यकिन छैन ।
हङ्कङ च्यारिटी पदयात्रामा बैकुण्ठ
भारी बर्षाको कारण खोला गाउँ पस्दा दुईसय घर डुबानमा